uMshado kaBabes Wodumo noMampintsha – The Ulwazi Programme
Bekukuhle kudelile ngenyanga edlule kugcagcelwa isilomo saseThekweni kwelikaBhanana esicula umculo wekwaito neGqomu uMandla Maphumulo odume ngelikaMampantsha kwezobumnandi eshadelwa inguduso yakhe uBongekile Simelane edume kakhulu ngegama lika Babes Woduma ocula umculo weGqom aziwa kakhulu ngawo. Abebehambele lomshado abawuvali umlomo ngobuhle bawo kanti nasezinkundleni zokuxhumana izithombe zawo lomshado beziyinsambatheka impela kuhle komchilo wesidwaba ziwundabamlonyeni nakubo abamaphepha, imisakazo kanye nabomabonakude.
Lomshado wawungomhlaka 26 Ephreli 2021 kanti ubuhanjelwe nawo osaziwayo abaningi abebemenywe kuwona. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka ophelile uMampintsha wahlaba ngedolo phansi ezikhalela ecela ukuba uBabes Woduma abe ngumkakhe ngokuphelele, nebala lentokazi yasivuma lesicelo somshado ngenyanga ka Okthiba 2020. Lokhu kube sekulandelwa izingxoxo zamalobolo phakathi kwemindeni yabo bobabili nawo aphetha kahle. Kuze kufike lapha ekutheni babe ngumakoti nomkhwenyana ngokugcwele kuzokhumbuleka ukuthi lezinqandamathe zike zaba nezinkinga eziningana ezivele nasezinkundleni zokuxhumana. Akukho soka elingenasici uMandla uwenzile amaphutha kubuka izwe lonke kepha njengoba nesintu sisho ukuthi umuntu akalahlwa, uwalungisile amaphutha akhe ingakho nje begcine bebophe ifindo lomshado lokhu kufakazela nakho ngampela ukuthi ubucu obuhle buhamba ngabubili.
Umshado kaBabes noMampintsha ububanjelwe endaweni yomtakabani eMhlanga nalapho abebedle khona ingqephu yesimanje yesintu. Ezithombeni ezisabalale ezinkundleni zokuxhumana kuyavela uMandla efake amabheshu nethimba lakhe ebelimmisile kanye naye uBongekile evunule ngesintu emuhle ephelele. Babe sebeshintshela kwezambatho zesimanje zesintu la ebebegqoke khona izembatho ezibuhlaza befaniselene. Kanti ke akumangazanga ukubona lezithandani zijabulisa abantu abebe zibungazile osukwini lazo njengoba zibe sezibadlalela ingoma ebeziqophele lona lolusuku lwabo lwenjabulo. Kosaziwayo abebekhona kubalwa odume ngelika “Dj Tira” insizwa yakwaKhathi kanye nomkayo uNksz Gugu Khathi, Dj Bongz, nabanye osaziwayo okubalwa kubo nomsakazi uNgizwe Mchunu oke wasebenzela umsakazo uKhozi Fm.